whatafunny events ! ….at myanmar tv station (since longtime ago ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » whatafunny events ! ….at myanmar tv station (since longtime ago )
whatafunny events ! ….at myanmar tv station (since longtime ago )
Posted by fatty on Oct 1, 2010 in Entertainment | 8 comments
Asia Radio Free Asia ကြုံရဆုံရ ..အသံလွှင့်ဌာန
title ကို english လိုရိုက်ပါဆိုလို့သာ …သိပ်တော့အရသာမတွေ့ဘူးဗျ။ ..ထားပါလေ ။
အဆက်ပေါ့ …. ဦးခင်မောင်ညိန်း က အဲဒီတုန်းက လက်ထောက်ညွှန်မှုးဖြစ်နေပြီ။ သတင်းအယ်ဒီတာလဲဟုတ်ကဲ့ …
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာ စနေ တနင်္ဂနွေဆို နေ့ခင်းပိုင်းသတင်းဖတ်ရတာကိုး … တရက်ပေါ့ နေ့ခင်းသတင်းဖတ်ရမဲ့နေ့ ကိုညိန်းဖတ်ရမယ့်နေ့ကိုး …
သူကသတင်းအယ်ဒီတာဆိုတော့ သတင်းတွေက သူ့ဆီအရင်ရောက်တယ်ဗျ အဲ သတင်းတွေလဲရောက်လာရော သူ့မျက်နှာက သိပ်မသာယာဘူး ..
သူ့တာဝန်က ရောက်လာတဲ့သတင်းတွေကို တည်းဖြတ်ရတယ်။
သူက အေ၇းကြိးပုဂ္ဂိုလ် vip လဲဖြစ်တယ်လေ ။ ရုံးကိုသူ့ ဘောက်စ်ဝက်ဂွန်ကားလေးနဲ့ လာလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရဘဲဗျ သူသတင်းတွေကြည့်ပြီး
မျက်နှာကသိပ်မကြည်ဘူး အဲဒီတုံးက ကျနော်တို့ကအရာရှိပေါက်စလေးတွေပါ။ သူ့လဲမမေးရဲဘူးလေ။ မေးလို့လဲမကောင်းဘူး သတင်းဆိုတာ မပေါက်ကြားရဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က တခုခုတော့ထူးခြားနေပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီ …. ဒါနဲ့သူသတင်းခန်းထဲဝင်ပြီး သတင်းဖတ်ေ၇ာဆိုပါတော့ …..
ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ်လုပ်နေကျအလုပ်ဆိုတော့ သူများထက်တော့ပိုသိတာပေါ့ ပိုပြီးအကဲခတ်တတ်တာပေါ့နော … အဲဒီနေ့က သတင်းတခုခုထူးခြားပြီဆိုတာသိတော့
အားလုံးက အာရုံစိုက်နေကြတယ်။ သူသတင်းဖတ်ပုံက တော်လေးထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းဖတ်နေရပုံဘဲ အီးမှန်တဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ ….
နောက်ဆုံးမှသတင်းကထွက်လာတယ် ….ဘောက်စ်ဝက်ဂွန်အပါအ၀င် အောက်ကားတွေ နယ်နှင်ကြောင်းနဲ့ နယ်မပို့ပါက ဖျက်သိမ်းကြောင်းသတင်းပါဘဲဗျား
အဲဒီတော့မှ သူ့မျက်နှာ အီးမှန်သွားတာဒါကြောင့်ကိုးလို့သိလိုက်ရတယ်။ ..သတင်းဖတ်ပြီးထွက်လာတော့ ကိုညိန်းခမျာ …ကုန်ပါပြီဗျာတဲ့ ..ကြိုပြီးသိပေမဲ့
အဲဒီလိုသတင်းမျိုး ကြေငြာရရင် အပြင်ကိုပေါက်ကြားမှာစိုးလို့ ရုံးက ဖုံးလိုင်းတွေလဲအကုန် ဖြတ်ထားတယ်ဗျ။ ကဲအဖြစ်ကတော့ မပြောချင်ဘူး …။
အခုတော့ကိုညိန်းက Radio Free Asia မှာ အစီအစဉ်မှုးပေါ့။
This is life as usual in Dictatorial state.
If the title is in English other than Burmese.
pro: faster catch up by search engines, good in search engine optimization (SEO). News will spread fast, far and wide.
con: need to learn English? but it’s still good.
ဦးဖက်တီးရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်။ ဦးသိန်းလှမော်ကတော့ အရေးအခင်းအပြီးမှာ ပြုတ်သွားတာလာ ပြန်မဝင်တော့တာလား မသိဘူး၊ ဦးကျော်စိုးဦးကိုတော့ တီဗွီပေါ်မှာပြန်တွေ့မိတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းနေ့ ပထမဆုံးကြေညာသူ ဒေါ်ခင်မလေးရော အခုရှိသေးလား။ သိရသလောက် သူက ဗိုလ်ခင်ညွန့်မပြုတ်ခင်အထိ ညွှန်ကြားရေးမှုးဆိုလား။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မှန်လေးတွေကို ဆက်ပြီးတင်ပါအုံး။
ကျေးဇူးပါ။ သိန်းလှမော် က ၈၈ အရေးအခင်းမှာ ၀န်ထမ်းအားလုံးထဲမှာ ပထမဆုံး ကန့်ကွက်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုးသူဖြစ်လို့ ..သူရဲကောင်းဆန်စွာပြုတ်တယ်ဆိုပါတော့ … အခုတော့တွေ့မှာပါ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ ဘိတ်သိပ် ဆရာအဖြစ် ရိုးသားစွာလုပ်နေပါတယ်။
ကျော်စိုးဦးလဲထွက်လိုက်ပါပြီ။ ဒေါ်ခင်မလေးက သတင်းကြေငြာသူ ပါ။ သူလဲကြာပြီထွက်လိုက်တာ …။
ကြုံလို့ထပ်ကွန့်လိုက်အုံးမယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အာဏာသိမ်းပြီး ကာလတဝိုက်ကပဲ တညမှာ ဒေါ်ခင်မလေးက ကြေညာနေတုန်း ဗြုန်းဆိုရပ်သွားပြီး သူ့နှုတ်ကနေ ဟယ်ရေးထားတာကလည်း မှားနေတယ်လို့ ရေရွတ်တာကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီး မြင်လိုက်ရတယ်။ သူကလည်း အသစ်ဆိုတော့ သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားပုံရတယ်။ ထူးဆန်းတာက နောက်နေ့တွေမှာ ဘယ်သူမှ သိပုံမရကြဘူး။ သတင်းဆိုတာကလည်း အဲဒီတုံးကတောင် ရှေ့ပိုင်းငါးမိနစ် လောက်ပဲ ကြည့်ကြတာဆိုတော့ နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ကြ။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်ထိအောင် ဘယ်သူမှ ပြောကြတာ မတွေ့မိလို့ တခါတလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဇဝေဇဝါဖြစ်မိတယ်။ ငါများထင်မိထင်ရာ ထင်ခဲ့မိလားလို့။ တွေ့ခဲ့တာ ကျွန်နော်တယောက်ထဲတော့မက အကိုလား အမေလားမသိ နောက်တယောက်ပါ သက်သေရှိခဲ့လို့ မမှားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သရဲပဲ တီဗွီကို ဝင်စီးခဲ့သလားမသိ။
ကြည့်ဇမ်းကြည့်ဇမ်း ဆန်ကုန်မြေလေး အသက်ကြီးအချိန်မစီးတွေ သူများအစိုးရကို သောက်တင်းတုတ်နေကြတယ်
ဘာဘဲပြောကြပြောကြ အနှစ်၂၀ က မြန်မာ အသံလွှင့်ဋ္ဌာန ဇတ်လမ်းပမာတွေကိုလွမ်းတယ်…နောက်ကျွန်းရွှေဝါသီချင်းလဲပါတယ်။ဒေါ်တင်တင်မြရောရှိသေးလား?ဗိုလ်ခင်ညွန့်ပြူတ်ပြီးမှာလေ…?